Ikhalenda I-Waterwheel yikhalenda enemilinganiselo emithathu eyenziwe ukusuka kumadangatye amathandathu ahlanganiswe ngendlela yephawu lamanzi. Jikelezisa ikhalenda eyimeleyo yodwa yedesktop yakho njengombane wamanzi inyanga nenyanga oza kuyisebenzisa. Ubomi boYilo: Uyilo lomgangatho lunamandla okutshintsha indawo nokuguqula iingqondo zabasebenzisi bayo. Banikezela ukuthuthuzela ukubona, ukubamba nokusebenzisa. Zixutywe kukukhanya kunye nenqaku lokumangaliswa, ukucebisa indawo. Iimveliso zethu zoqobo zenziwe kusetyenziswa umxholo "Wobomi ngoYilo".
Ukusebenza Kweewadi Ezisebenzayo
Ukusebenza Kweewadi Ezisebenzayo "I-Shanghai" yewadi esebenzayo. Ipateni yangaphambili kunye nefom ye-laconic isebenza njenge "donga lokuhombisa", kwaye oku kuyenza ukuba ibone ikhabethe njengento yokuhombisa. Yonke inkqubo “ebandakanyayo” ibandakanya ukugcinwa kweevolumu ezahlukeneyo; iitafile ezibekwe ecaleni kwebhedi ziyinxalenye yobungqina beewadi ezivaliweyo kwaye zavalwa ngakwicala elinye lokuphambili; Izibane ezi-2 ezakhelwe-ngaphakathi ebusuku ezifihlwe phantsi kwevolumu ebalaseleyo kumacala omabini ebhedi.Iyona nxalenye iphambili yekomityi yenziwe ngesixhobo esincinci somthi. Inezicucu ezili-1500 zeekempas kunye namaqhezu ama-4500 eoyiki ehlanganisiweyo.
Itafile Yokuphela Itheyibhile yokuGqibela iTafile yitafile encinci, enobuhlobo eco-with a solid visual. Umphezulu wentsimbi ohlaziyiweyo uye wanqunyulwa-ngepatheni yendlela enqabileyo edala ukukhanya neendlela zethunzi. Imilo yemilenze yoqalo ijikelelwa ekujikelezeni kwentsimbi, kwaye imilenze nganye elishumi elinesine idlula kwindawo yentsimbi ize emva koko inqunywe phantsi. Ukubonwa ukusuka phezulu, i-bamboo eyenziwe ngekhabhoni idala iphethini yokubopha, ivalwe ngokuchasene nentsimbi egqibeleleyo. I-bamboo yinto engavuseleleki ngokukhawuleza eluhlaza, kuba bamboo yingca ekhula ngokukhawuleza, hayi imveliso yeenkuni.
Into Yokudlala Abantwana bayayithanda le nto yokudlala imnandi, ngelixesha ujongeke ngayo, imizobo emnandi kunye neenkuni zendalo, ngababambisi bamehlo kwikhaya lanamhlanje. Umceli-mngeni wokuyila ubandakanya ukugcinwa komlinganiswa obalulekileyo wento yokudlala ubumnandi be-heirloom, ngelixa usebenzisa ubuchwepheshe obuphambili kunye nenkqubo modular yokwakha ukuvumela iintlobo ezizayo ezongezelelweyo zezilwanyana ezinotshintsho oluncinci lwenxalenye. Imveliso efakiweyo ikwafuneka icwecwe kwaye iphantsi kwe-10kg kwizitayile ezithengisa ngokuthe ngqo zeintanethi. Ukusetyenziswa kwesiliphu sokuphrinta ngokwezifiso kuyinto yokuqala eyokuqala, ekhokelela ekugqibezeni kombala / ukuguqulelwa kwepateni kwindawo enganyangeki kwaphela
Ifanitshala Yedesika Yasekhaya
Ifanitshala Yedesika Yasekhaya Imvakalelo yokukhanya engaboniyo kobu buhle kwaye nangona kunjalo idesika eyomeleleyo isibuyisela kwisikolo soyilo. Imilo emxinwa yemilenze, indlela ethe nca ngayo ngaphambili ngokungathi sisenzo sobukhosi sokubulisa, isikhumbuza isilouette yendoda ebekekileyo inxibe umnqwazi wayo ukubulisa inenekazi. Idesika iyasamkela ukuba siyisebenzise. Imilo yazo, njengemilenze eyahlukeneyo yedesika, kunye nokuziva kwayo okujingayo kunye nembonakalo yangaphambili yomntu, iskena kwigumbi njengamehlo abukeleyo.
Isitulo Sebha I-Barcycling isitulo sebha eyenzelwe ukuba ibe yimidlalo enezinto ezinemixholo.Ithatha ingqalelo nomfanekiso wobungqingili kwisitulo sebar, ngenxa yendlela emiswe ngayo ngebhayisekile kunye nokuhamba ngebhayisekile.Ukuphakamisa ithambo lesitulo se polyurethane kunye nesihlalo esiphakamileyo sombane .Xa ukuthamba kwe polyurethane, ulusu lwendalo kunye nomgangatho wokuthunga wesandla ufuzisela ukuqina.Angafani nesitulo sebha emileyo apho unyawo lwenyawo alunakutshintshwa, ukuxhoma ubushushu kwenza ukuba ukuhlala okungafaniyo kugcinwe imigangatho kwiindawo ezahlukeneyo.Ngoko iyenza ihlale ixesha elide kwaye intofontofo. ndihleli.
Ikhalenda Ukusebenza Kweewadi Ezisebenzayo Itafile Yokuphela Into Yokudlala Ifanitshala Yedesika Yasekhaya Isitulo Sebha